February 2014 | အ င်္လ ကာ ည
How to gets the gold? Part -2
How to get the Golds? -part-1
ရွှေရဖို့အတွက် လွယ်မယ်ထင်သလားမိတ်ဆွေ ......
သွားချင်တဲ့နေရာသွား ..... သွားတဲ့နေရာ ခြေနင်းတဲ့ မြေကြီးက ရွှေထွက်နေတာကို။။။။။
ဒါပေမယ့် သေချာသွားကြည့်တော့မှ မလွယ်ပါလားဆိုတာ သိလာတယ်
မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်အထိ ထမင်းစားချိန်ကလွဲလို့ တစ်နေကုန် ရေနဲ့ထိတွေ့နေရတော့ ခြေနဲ့လက်တွေက ရေတွေနူး ပြီးတော့ ကပ်ပါးမှိုစွဲလို့ သဲဝဲတွေဖြစ်ကုန်ရော။
ဒါ့အပြင် လက်မသန့်ရှင်းတာကြောင့် အစားအစာ စားသောက်တဲ့အခါ ဝမ်းရောဂါလည်းဖြစ်ပြန်ရော။ ဒါက ကျန်းမာရေးကိုပြောတာ။
ပိုက်ဆံရှာရတာက လွယ်တာကိုး။ အရင်းအနှီးရှိစရာမလိုဘူး အိမ်ရှိလူအကုန်ထွက် “အင်ဝိုင်း” ကို လက်မှာကိုင် တွေ့တဲ့မြေကြီးကို အင်ဝိုင်းပေါ်တင်ပြီး ရေထဲမှာ ကျင်လိုက်ရင် ရွှေရလာတာကို။ ပြီးတော့ ရလာတဲ့ ရွှေချီးမည်းမည်း ကို ပြဒါး နဲ့ဖမ်း ၊ ဒါက အကြမ်းဖျဉ်း ပြောပြတာပါ။
(စကားချက်။ ။ အင်ဝိုင်း ဆိုတာ ဆန်ပြာတဲ့စကော ပုံစံပါ....၎င်းကို သစ်သားပြားနဲ့လုပ်ပြီး အလယ်မှာ အခွက်ကလေး လုပ်ထားတာကို ခေါ်တာပါ)
အဲ့ဒီတော့ အိမ်ရှိလူအကုန်ထွက်ဆိုတော့ ကလေးပညာရေးကို စာဖတ်တတ်ရုံလောက်ဆိုတော်ပါပြီ
ပညာတတ်တော့လည်း ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေကြောင့် ကလေးတော်တော်များ စာမတတ်ကြဘဲ စားဝတ်နေရေးအတွက် မနက်မိုးလင်း ထမင်းထုပ်ကိုယ်စီယူပြီးတစ်ပိုင်တစ်နိုင် ရွှေကျင်ကြတယ်။ တစ်နေ့ကို ရွှေ (၄)ရွေးဆိုလည်း ဟုတ်၊ (၅)ရွေး ဆိုလည်း ဟုတ် ဆိုတော့ မိသားစုဝင်ငွေက မဆိုးဘူးပေါ့။ရွှေ(၁)ရွေးကို ၅၂၀၀ ကျပ် ပေါက်ဈေးဆိုတော့ သူတို့အတွက်ဖူလုံတယ်။ဒါပေမယ့် ဟိုဥက္ကဌပေးရ၊ ဒီ ရဲ ကို ပေးရ ပြီးတော့ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ လူကြီးခရီးစဉ်များရှိရင် အလုပ်မလုပ်ရဘဲ ရှိတာလေး ထိုင်စားရတော့ ရှာသလောက်မလောက်ပဲ ရှိကုန်ကြတော့တာပါ့ ။ တစ်ခါတစ်လေ ရွှေအရနည်းလာရင် စက်ယန္တရားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ရွှေကုမ္ပဏီတွေမှာ တောင်းပန်ပြီး မျောမီးခံကြတယ်။
(စကားချက်။ ။ မျောမီးခံတယ်ဆိုတာ ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ စီးဆင်းလာတဲ့မြေကြီး ကို ပိုင်ရှင်တွေရွှေမျောခံပြီးမှ ၎င်းအောက်မှတဆင့်ခံတာကို ပြောတာပါ)
အဲ့ဒီတော့ တစ်ခြားလုပ်ငန်းကို ဘာမှသိပ်မလုပ်တတ်ကြဘဲ ၎င်း လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲကိုသာ မိရိုးဖလာလုပ်ငန်း အဖြစ်လုပ်ကိုင်လာကြတာ ယနေ့ထိတိုင်အောင်ပါပဲ။
ကျောင်းပညာရေးအနေနဲ့လည်း ရွာတွေမှာ ဆရာ/ဆရာမ မလုံလောက်မှု၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားအခက်အခဲ၊စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ၊ ရပ်ရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း၊ မိဘများ၏ပြုစုပျိုးထောင်အားပေးမှုနည်းခြင်းကြောင့် ကလေးများ ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်နိုင်ကြ ဘဲ ပညာဗဟုသုတ ချို့တဲ့ခဲ့ကြရပါတယ်။
ပိုက်ဆံရှိအသိုင်းအဝိုင်းတော့ ငွေလုံးငွေရင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ၊ပြီးတော့ စက်ယန္တရားကြီးတွေနဲ့နေ့ည မပျက် အလုပ်လုပ်၊ မှုန်စုပ်စက်မျိုးစုံနဲ့ မြေဆီလွှာတွေကို ထိုးဆွ၊ အဲ့ဒီတော့ တောတောင်တွေပြုန်းတီး၊ တောင်ကတုံးတွေဖြစ်ကုန်ကြရော၊ ရလိုက်တဲ့ ရွှေ သောက်သောက်လဲ၊ တစ်ချို့ကြတော့ အခွန်ဆောင်၊ လုပ်ကွက်ကိုတရားဝင်လုပ်ကြတယ်၊
တစ်ချို့ကြတော့လည်း နီးစပ်ရာ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကိုပေး၊ ရွှေလုပ်ကွက်လေးတွေရလာပြီး လုပ်ကိုင် ကြတယ်။
မည်သို့ပင်ရွှေမျောလုပ်ကိုင်ကြပါစေ တောင်တွေသည် မြေပြန့်တွေဖြစ်၊ မြေပြန့်တွေသည် တောင်ကတုံး ဖြစ်လာတာကိုတော့ မုံရွာမြို့မှ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောတစ်လျောက် ဆန်တက်လာရင် သတိပြုမိကြမှာပါ။ ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းရောက်လေ ပိုပြီး တောင်ကတုံးတွေကိုတွေ့ရလေပါပဲလေ။
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် သစ်ခုတ်/သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုလျော့ချခဲ့ပြီး စိမ်းလန်းစိုပြေရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။
အလားတူ ရွှေမျောလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေကို လျော့ချမပေးနိုင်တောင် တိတိကျကျသတ်မှတ်နေရာချပေး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ သာယာလှပ လာပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်ယူဆမိပုံကို
ရွှေမျော လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပါ ဗဟုသုတ အဖြစ်သိရှိနိုင်ကြရန် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တောတောင်များသည် မြေပြန့်ဖြစ်သွားသော နေရာများ
လူတော်တော်များများကပြောကြတယ် သစ်ခုတ်တာက သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးတယ်။
အော် ဒါဆို အခုလို ရွှေမျောတိုက်တာကြတော့ ကော သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်မပျက်စီးဘူးလား
အမှန်တော့ ပျက်စီးတာခြင်းတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း သစ်ခုတ်ပြီးသွားတဲ့နေရာမှာ သစ်ပင်ပြန်စိုက်လို့ရပါတယ်။ သို့သော် ရွှေမျောတိုက်ပြီးတဲ့နေရာမှာ သစ်ပင်ပြန်ပေါက်ဖို့တော့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ
သစ်ခုတ်တာကို တားမြစ်တယ် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လို့. လက်ခံပါတယ်
ရွှေမျောလုပ်တာကိုကျတော့ တားမြစ်ပိတ်ပင်သံ သိပ်မကြားရဘူး
ရွှေမျောလုပ်မယ် ဌာနကို ပေးမယ်
ရံဖန်ရံခါ ရွှေမျောထဲကိုအဖမ်းပြတယ် ပြီးရင် ပိုက်ဆံပေး လွှတ်လိုက်လေသတည်း။